🥇Forex CFD ပွဲစား Libertex ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - အပြည့်အစုံ ဇွန်လ 2022 လမ်းညွှန်
Libertex ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ပျံ့နှံ့ခြင်း၊
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 11 မေလ 2022
၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၌နာမည်ကြီးသောကုန်သွယ်ရေးကြမ်းပြင်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝသူများအတွက်ကစားကွင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီနေ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိသူမည်သူမဆိုလက်လှမ်းမီနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာလူ ၁၀ သန်းနီးပါးဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာတက်တက်ကြွကြွကုန်သွယ်နေကြတယ်။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းပွဲစားကုမ္ပဏီများအတွက်အလွန်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်သည်။
ဒီနေ့မှာတော့လူကြိုက်များတဲ့ Libertex ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်တော့မယ်။ ဒီဆိုဒ်တွင် CFD တူရိယာ ၂၀၀ ကျော်ရှိပြီးပွဲစားသည်နိုင်ငံတကာအကောင်းဆုံးဆု ၃၀ ကိုရရှိခဲ့သည် - အကောင်းဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းအပါအ ၀ င်!
သင်ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သည့်အရာနှင့်သင်ပေးဆောင်ရမည့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုမသွားမီကုမ္ပဏီအကြောင်းနောက်ခံအချက်အလက်အနည်းငယ်နှင့်စတင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Libertex ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုအပြည့်အ ၀ ဖတ်ပြီးသည့်နောက်တွင်ပွဲစားသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်သင့်တော်မှုရှိ၊ မရှိနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သင့်သည်။
Libertex - CySEC Regulated Forex နှင့် CFD Trading Platform
အွန်လိုင်းသို့မဟုတ် MT4 ပလက်ဖောင်းမှတဆင့်ကုန်သွယ်
ငါတို့ထိမိသည်နှင့်အမျှ Libertex သည် '၂၀၂၁ ၏အကောင်းဆုံးရောင်းဝယ်ရေးပလက်ဖောင်း' အပါအ ၀ င်ဆုများစွာဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ ပွဲစားသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှစ၍ ကုန်သွယ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနိုင်ငံအမျိုးမျိုးမှဖောက်သည် ၂.၂ သန်းကျော်လက်ခံခဲ့သည်။ ပလက်ဖောင်းကို CySEC မှထိန်းချုပ်ပြီးကြီးကြပ်သည်။
ရောင်းဝယ်နိုင်သောတူရိယာများနှင့် ပတ်သက်၍ Libertex သည် CFDs ကိုအထူးပြုသည်။ ၎င်းသည် cryptocurrencies ပုံစံဖြင့်သာမကဘဲ ETF များ၊ စတော့များ၊ forex၊ သတ္တုများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ညွှန်းကိန်းများနှင့်ဓာတ်ငွေ့များကို CFDs တွင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်နိုင်သောတူရိယာများကိုအသေးစိတ် ထပ်မံ၍ ဖုံးအုပ်ပါ။
အရေးကြီးသည်မှာ Libertex သည်အွန်လိုင်းအာကာသအားသွင်းသည့်ပွဲစားအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ကြပ်သော ၎င်း၏ဖောက်သည်များသို့ပြန့်ပွားသည်။
ငါ Libertex မှာဘာကုန်သွယ်မှုရနိုင်သနည်း
Libertex သည် CFDs များကိုအာရုံစိုက်သည်ဟုဆိုသည်နှင့်အညီဤပလက်ဖောင်းတွင်ရောင်းဝယ်နိုင်သောရာပေါင်းများစွာရှိသည်။ Brent ရေနံစိမ်းကဲ့သို့ကုန်စည်များနှင့် Dow Jones ကဲ့သို့ CFDs ညွှန်းကိန်းများပါ ၀ င်သည်။
အောက်တွင် Libertex ၌သင်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကိုအပြည့်အဝချိုးဖောက်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဆိုဒ်၌ရောင်းဝယ်မှုအများဆုံး CFD များသည် GBP/USD နှင့် EUR/USD တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမှိုက်ပုံများရှိငွေကြေးများစွာရှိသည်။
ထူးခြားဆန်းပြားအားလုံးအတွက် CHF / SGD, EUR / CNH, USD / DKK, EUR / NOK, GBP / SEK, EUR / RUB တို့ပါဝင်သည်, သင်သည်တောင်အာဖရိက rand (ZAR) မက္ကဆီကန် peso (MXN) ကဲ့သို့သောငွေကြေးများကိုလည်းတွေ့လိမ့်မည်။
အဓိကအတွဲများ Libertex မှတစ်ဆင့် USD / USD၊ AUD / USD၊ GBP / USD, NZD / USD, USD / CAD, USD / CHF နှင့် USD / JPY တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးအတွက်ဖြတ်ကူး ရရှိနိုင် AUD / CAD, AUD / JPY, AUD / CHF, CAD / CHF, GBP / AUD, GBP / NZD, GBP / CAD နှင့်ပိုများသောပုံများ
Libertex ရှိလက်လီ ၀ ယ်သူများသည် MT4 (သို့) Libertex အက်ပလီကေးရှင်းမှတဆင့် CFD forex အတွဲများကိုရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
CFDs များကို Libertex မှကုန်သွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘဲရှယ်ယာရာထူးများကိုသင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ အဲဒီအစား, သင်မျှသာရှယ်ယာမြင့်တက်သို့မဟုတ်ကျလိမ့်မည်ရှိမရှိခန့်မှန်းပါတယ်။ စတော့ရှယ်ယာများ၏ဘာသာရပ်တွင်, ဒီပလက်ဖောင်းပေါ်မှရွေးချယ်ဖို့ 50 ကျော်ရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းတစ်ခုချင်းစီကိုစာရင်းပြုစု။ မရပါ။ ထို့ကြောင့်ဥပမာအချို့နှင့်အတူရနိုင်သောရနိုင်သောအမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။
လူသုံးကုန်: Coca-Cola, Nike, Adidas AG နှင့် Proctor and Gamble တို့ဖြစ်သည်
နည်းပညာများ - Netflix၊ Spotify၊ Dropbox၊ China Mobile၊ Vodaphone
ဇိမ်ခံ: Estée Lauder, Michael Kors Holdings, Ralph Lauren, Tiffany & Co
စက်မှုလုပ်ငန်းများ: ဘိုးအင်း, Caterpillar
ဘဏ္ဍာရေး: American Express၊ Goldman Sachs Group၊ JPMorgan Chase & Co၊ MasterCard
မော်တော်ကားလုပ်ငန်း Harley Davidson, Ferrari, Ford Motor တို့ဖြစ်သည်
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန: Electricite de France (EDF)၊ Enel Chile SA၊ PetroChina
ဆက်သွယ်ရေး Apple၊ Amazon၊ Hewlett-Packard၊ Pinterest၊ Microsoft၊ Twitter
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု: ယူနိုက်တက်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် Aurora Cannabis၊
ပစ္စည်းထုပ်: Sociedad Quimica y Minera de Chile (ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည်) ကဲ့သို့
ဘောလုံးပရိသတ်များအတွက်ဂျူဗင်တပ်ဘောလုံးအသင်း SPA ရှိသည်။ Stock CFD အရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်အနည်းဆုံးပမာဏသည်ယူရို ၂၀ ထက်မနည်းရှိရမည်။
ညွှန်းကိန်းများအရဥရောပနှင့်အမေရိကန်စီးပွားရေးများ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိအာရှနှင့်အစ္စရေး ၃၅ အထိကျယ်ပြန့်စွာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိသည်။
သင် Libertex တွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သော CFDs ညွှန်ကိန်းအချို့ကိုကြည့်ကြပါစို့။
အကယ်၍ သင်မြောက်အမေရိကစျေးကွက်ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင် Dow Jones, S&P 500, NASDAQ 100, Russell 2000 စသည့်သာမာန်အားဖြင့်ကစားသမားကြီးများကိုအနည်းငယ်ဖော်ပြပါလိမ့်မည်။
ဥရောပညွှန်းကိန်း CFD များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် DAX, Spain 35, FTSE 100, Italy 40, Russia50 Index နှင့်အခြားအရာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။
အာရှကမ်းလှမ်းချက်များမှာ China A50၊ Nikkei 225 နှင့် Hang Seng Index များဖြစ်သည်။ တောင်အမေရိကတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ချီလီအညွှန်းကိန်းရှိသည်။
ဒီပလက်ဖောင်းရှိကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သင် CFDs ကို အသုံးပြု၍ အောက်ပါတူရိယာများကိုသင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
ကဲ့သို့သောသတ္တုများ ရှေ နှင့် ကြေးနီ
Libertex တွင် Crypto CFD အရောင်းအ ၀ ယ်သည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ပွဲစားသည် Bitcoin မှ Chainlink အထိ cryptocurrencies အမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသည်။
စင်မြင့်ပေါ်တွင်သင်မည်သည့်အရာများကိုအသုံးပြုမည်ကိုသိနိုင်ရန်ကုန်သွယ်ရေး crypto ဒင်္ဂါးအချို့ကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
Litecoin / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Bitcoin ငွေသား / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Bitcoin ရွှေ / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Bitcoin Cash / Bitcoin (လက်ဝါးကပ်တိုင် pair တစုံ)
Litecoin / Bitcoin (လက်ဝါးကပ်တိုင် pair တစုံ)
Bitcoin / EUR (လက်ဝါးကပ်တိုင်)
Ethereum / Bitcoin (လက်ဝါးကပ်တိုင် pair တစုံ)
Ethereum ဂန္ထဝင် / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Monero / Bitcoin (လက်ဝါးကပ်တိုင် pair တစုံ)
EOS / Ethereum (လက်တွဲဖော်)
Libertex တွင် ပို၍ crypto ရောင်းဝယ်ရေးရွေးစရာများရှိသည်၊ ငါတို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းတင်းကျပ်သောပြန့်နှံ့မှုများရှိသည်။
မသိသောသူတို့အဘို့ - တစ် ETF (Exchange Traded Fund) သည်များသောအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများသို့မဟုတ်မဟာဗျူဟာများစွာ အသုံးပြု၍ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များရွေးချယ်ခြင်း၏နောက်ခံညွှန်းကိန်းကိုခြေရာခံသည်။
ဤတွင်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရရှိနိုင်သော ETF CFDs ၏ဥပမာတစ်ခု - MT4 အပလီကေးရှင်း (သို့) Libertex အက်ပလီကေးရှင်းမှတဆင့်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
iShares Core US Aggregate Bond ETF CFDs ကို 27% Corporate bonds, 28% Mortgage securities နှင့် 45% အစိုးရ bonds များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
တူညီသော ETF CFD သည်လည်းပထဝီဝင်အနေအထားအရကွဲပြားသည်။ ကနေဒါ ၁%၊ ဂျာမနီ ၆%၊ မက္ကဆီကို၊ နယ်သာလန်၊ ဂျပန်၊ သြစတေးလျ၊ အိုင်ယာလန်၊ ကိုလံဘီယာနှင့် ၉၃% USA
သတိပြုရမည်မှာသင်သည် Libertex ရှိဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များကဲ့သို့ CFDs မှတစ်ဆင့်အထက်ပါ ETF ကိုကုန်သွယ်လိမ့်မည်။
အခကြေးငွေနှင့်ပတ်သက်။ အခါ, ပွဲစားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ ယင်းအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ပွဲစားစာရင်းအသစ်တစ်ခုကိုစာရင်းမသွင်းမီသင့်ကိုယ်ပိုင်သုတေသနကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။
Libertex သည်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်လစဉ်ကြေးမကောက်ခံပါ၊ တင်းကျပ်စွာပြန့်နှံ့သည် - သို့သော်ပွဲစားသည်ငွေရှာရန်လိုသေးသည်။ စိတ်ထဲတွင်ရှိသည်၊ ငါတို့သည်ပွဲစားဆိုဒ်တွင်ရှာဖွေရန်အခြားအခကြေးငွေအနည်းငယ်ကို delve လုပ်လိမ့်မည်။
ဖောက်သည်၏အကောင့်သည်ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ (အကယ်၍ အရောင်းအ ၀ ယ်မရှိ၊ ရာထူးမဖွင့်ပါ၊ ငွေထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ငွေသွင်းခြင်းမရှိ) ရှိနေပါကကုမ္ပဏီသည်တစ်လလျှင်အကောင့်ထိန်းသိမ်းမှုအခကြေးငွေ ၁၀ ယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (၎င်းသည်စုစုပေါင်းအကောင့်လက်ကျန်ယူရို ၅၀၀၀ အောက်ရှိသောဖောက်သည်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ )
နေ့ချင်းညချင်းငွေလဲလှယ်ခြင်း / အတိုးနှုန်းပြောင်းခြင်းအတွက်ကုန်သွယ်ရေးနေ့ကုန်ဆုံးချိန်တွင်ဖွင့်ထားသည့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဤအခကြေးငွေကိုကောက်ခံပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည်တနင်္ဂနွေနေ့တစ်လျှောက်ရာထူးတစ်ခုကိုကျော်လွှားနိုင်ပါက CFD တူရိယာများအရဤအခကြေးငွေသည်သုံးဆတိုးလာလိမ့်မည်။
ပွဲစားများအားလုံးသည်တတိယပါတီကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်တို့သည် Libertex သည်လူကြိုက်များသော MT4 နှင့်သဟဇာတဖြစ်ရုံသာမကပွဲစား၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားဖြစ်ပလက်ဖောင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းလည်းပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်စွာဖော်ပြသည်။
အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်အများစုသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင် MT4 ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤ Libertex-လိုက်ဖက်တဲ့ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းသည်မြေထုသို့အသုံးဝင်သောကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊ MT4 မှတစ်ဆင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများသည်ကုန်သည်များသည်အကောင့်တစ်ခုထက်ပိုပြီးသုံးနိုင်သည်။ အရောင်းစက်ရုပ်များကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။
Libertex တွင်ကုန်သွယ်ရန် MT4 ကိုအသုံးပြုသောအခါသင်အသုံးချနိုင်မည့်အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ရွေ့လျားသည့်ပျမ်းမျှပြောင်းလဲမှုမတူကွဲပြားမှု (MACD)၊ Bollinger Bands၊ Exponential Moving Average (EMA), Ichimoku စသည့်အသုံးဝင်သောလမ်းကြောင်းညွှန်ကိန်းများ
အမှာစာများ၊ Xandra အကျဉ်းချုပ်၊ Undock ဇယား၊ SHI Channel True၊ ရာထူးအရွယ်အစားတွက်ချက်သူ၊ SL & TP တန်ဖိုးများ၊ Breakout Zones များ၊ Autofibo၊ i-Profit Tracker၊
အမိန့်ရွေးချယ်စရာများ: စျေးကွက်အမိန့်၊ ရပ်နားရန် ၀ ယ်ခြင်း၊ ရောင်းရန်ရပ်နားရန်၊ ကန့်သတ်ချက်ရောင်းရန်၊
သတိပြုပါ၊ MT4 ကို desktop ဆော့ဝဲလ်နှင့်အခမဲ့မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများမှပင်ရနိုင်သည်။ နောက်တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်သင်၏အလိုအလျောက်အရောင်းအ ၀ ယ်စက်ရုပ်၏လုပ်ဆောင်ပုံကို tabs များထားရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။
Libertex ဝက်ဘ်ဆိုက်ကဲ့သို့ပင်၊ Libertex အက်ပလီကေးရှင်း၏ကုန်သွယ်မှုပမာဏအနည်းဆုံးသည်သင်၏ငွေကြေး (၁၀ ဒေါ်လာ၊ ပေါင် ၁၀ စသည်) ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာနှင့်အတူစတော့ CFD များသည်ယူနစ် ၂၀ တွင်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
Libertex အက်ပ်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းများ၊ ဘဏ္newsာရေးသတင်းများနှင့်အရောင်းအဝယ်အချက်ပြမှုများ၏အမှိုက်ပုံများရှိသည်။ ကုန်သည်များသည်အက်ပလီကေးရှင်းကို Android အတွက် Google Play သို့မဟုတ် Apple App Store မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်သည် app ကို Libertex ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
တရား ၀ င် application ကိုအသုံးပြုသူများကအလွန်အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီးအများစုကအသုံးပြုသူအတွက်လွယ်ကူသောဒီဇိုင်းနှင့်အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် app ကိုချီးမွမ်းကြသည်။ သင်၏လက်ဖဝါးမှအမိန့်များကိုသင်လုပ်နိုင်သည်၊ တိုက်ရိုက်စျေးနှုန်းများကိုတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည်၊ ငွေသွင်း / ထုတ်ယူနိုင်သည်။
Libertex သည်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလင်းလက်စေသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး အနေဖြင့်၊ သင်ကအသေးစိတ်ပညာရေးဆိုင်ရာဗီဒီယိုများနှင့်ဘဏ္newsာရေးသတင်းများနှင့်အချက်ပြမှုများစွာရှိသော webinars ကိုရရှိလိမ့်မည်။
ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာအပြင်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးနှင့် ပတ်သတ်၍ ကုန်သွယ်မှုသင်ခန်းစာ ၃၀ နီးပါးရှိသည်။ ဒီမိုဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ အပါအ ၀ င်အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကိုမမေ့ပါနှင့်။
ဒီပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်နေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ပေါ် မူတည်၍ ရရှိနိုင်မယ့်အရာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။
သင်၏အကောင့်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသောအချိန်သည် Libertex တွင်ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းအချိန်သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော် SEPA / International Bank Wire ဖြင့်ငွေသွင်းလျှင်သင်၏အကောင့်သို့ရောက်ရန် ၃ ရက်မှ ၅ ရက်အကြားကြာနိုင်သည်။ ဤအပြောင်းအလဲသည်အချိန်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအစီအစဉ်များကိုသိသာစေလိမ့်မည်။
ငွေထုတ်ရန်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးပြုသောနည်းလမ်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားမှုအချို့ရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ငွေပေးချေမှု (ရှိလျှင်) နှင့်အပြောင်းအလဲအချိန်နှင့်အတူလက်ခံနိုင်သောငွေထုတ်ရန်နည်းလမ်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ခရက်ဒစ်ကဒ် - ကြေး ၁ ဒေါ်လာ - ၁-၅ ရက်အတွင်း
Neteller - ကြေး ၁% - ၂၄ နာရီအတွင်း
Skrill - သုညအခကြေးငွေ - ၂၄ နာရီအတွင်း
SEPA / အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်ငွေလွှဲခြင်း - ၀.၅% min ၂ ယူရို၊ အများဆုံး ၁၀ ယူရို - ၃ ရက် ၃ ရက်အတွင်း
Libertex ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့သည်တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့အထိ - နံနက် ၈ နာရီမှည ၈ နာရီအထိဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်များရရှိနိုင်သောဆက်သွယ်ရန်နည်းလမ်းများမှာတယ်လီဖုန်း၊ အီးမေးလ်၊ စာနှင့် In-platform အဆက်အသွယ်ပုံစံဖြစ်သည်။
အကူအညီကဏ္sectionsများကိုဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးစသည့်ကဏ္intoများကိုခွဲခြားထားသည့် FAQ အပိုင်းလည်းရှိသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာ Libertex သည်သင်၏အဆင့်အတန်းနှင့်အနိမ့်ဆုံးအကောင့်လက်ကျန်ငွေကို အခြေခံ၍ အကောင့်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်သင်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ထဲကိုအမှန်တကယ်ငွေသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့လက်ကျန်ငွေကိုဘယ်အဆင့်အတန်းကနေဖွင့်လို့ရမလဲ။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ clients များသည်စက္ကူသရုပ်ပြရန်ပုံငွေများတွင်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ ပါ ၀ င်သောအခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကို ၀ င်ခွင့်ရှိသည်။ ဒီသရုပ်ပြအကောင့်ကိုလူတိုင်းရနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ Libertex သရုပ်ပြအကောင့်ဟာတကယ့်ငွေကြေးကိုစွန့်စားဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့လူသစ်ကုန်သည်များအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။ လေ့လာသူအသစ်များအပြင်သရုပ်ပြအကောင့်များသည်စျေးကွက်ထဲသို့မ ၀ င်ခင်မဟာဗျူဟာအသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသုံးချင်သောအတွေ့အကြုံရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
Libertex ဖြင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဒါပေမယ့်၊ သင်စတင်ရန်, ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်သုံးဆင့်ပါသောလမ်းလျှောက်မှုကိုအတူတကွပြုလုပ်ထားသည်။
စာရင်းသွင်းရန်ပထမအဆင့်မှာ Libertex ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာ၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသော 'login' ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုနှိပ်ပါ၊ ပြီးနောက်စာမျက်နှာအသစ်သို့ရောက်လိမ့်မည်။
သင်ညာဘက်ရှိ sign-up box တစ်ခုကိုတွေ့ပါက 'sign up' ကိုရွေးချယ်ပြီးသင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ထူးခြားသောစကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်
အဆင့် ၂ - သင်၏ Libertex အကောင့်ထဲသို့အပ်နှံပါ
မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာကြာသောသင်၏ Libertex အကောင့်ကိုအောင်မြင်စွာထူထောင်ပြီးပြီဟုယူဆလျှင်သင်သည်ဤစာမျက်နှာကိုထပ်မံဖော်ပြထားသောလက်ခံထားသည့်အပ်ငွေနည်းစနစ်များထဲမှတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ သင်၏ငွေစာရင်းကိုငွေထောက်ပံ့နိုင်သည်။
ယခုသင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုပုံစံနှင့်အညီသင့် Libertex interface ကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းကိုအပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်မပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းကွဲပြားခြားနားသောတင်းပလိတ်များကို သုံး၍ အခြားဆက်တင်များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏အကောင့်သို့အနည်းဆုံးယူရို ၁၀၀ သိုက်သွင်းပြီးနောက်သင်အရောင်းအဝယ်စတင်နိုင်သည်။ Libertex ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသွားကြည့်ရန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံး demo account တစ်ခုသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ကန ဦး ငွေသွင်းခြင်းဖြင့်စတင်ပါတယ်။
အားလုံးကိုခြုံကြည့်လျှင် Libertex သည်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုကောင်းများကိုပေးသည်။ မည်သည့်ကုန်သည်မဆိုနားထောင်နိုင်သောသီချင်းသည်တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုကိုပေးသောပွဲစားများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအရ Libertex သည်အစပြုသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၊ သတင်းအသစ်များနှင့်အသေးစိတ်ကုန်သွယ်မှုသင်ခန်းစာ ၃၀ နီးပါးရှိပြီးဖောက်သည်များအတွက် - စေ့စေ့စပ်စပ်ဗွီဒီယိုများပါရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးသင်လွယ်ကူစွာကုန်သွယ်ရန် MT30 ကိုသုံးနိုင်သည်။
Libertex သည် Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) မှအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်ပြီးလိုင်စင်ချထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဆိုဒ်သည်တင်းကြပ်စွာစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားပြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့မှချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
သင်ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံလိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်၌ရှိပါကယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် - KYC စည်းမျဉ်းများအရ၎င်းသည်သင်၏ဓာတ်ပုံ၊ အမည်နှင့်မွေးသက္ကရာဇ်ကိုဖော်ပြသောတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ဖြစ်သည်။
ငါ Libertex မှတဆင့် cryptocurrencies ကုန်သွယ်နိုင်သလား?
ဟုတ်ပါတယ်, ဒီ platform ပေါ်တွင်ကုန်သွယ်ရန်ရရှိနိုင် cyptocurrencies ၏ကျယ်ပြန့ရှိပါတယ် - အနည်းငယ်အမည်ကို Litecoin, DASH, Bitcoin Cash နှင့် Ethereum ။
Libertex သည် MetaTrader4 software နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်။ သင်၏ Libertex အကောင့်ကို MT4 မှတဆင့်အက်ပ် (Android သို့မဟုတ် iPhone) သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည်။ MT4 ဆော့ဖ်ဝဲကိုသင်၏ desktop စက်ထဲသို့လည်းကူးယူ။ သင်၏ Libertex အထောက်အထားများနှင့်လည်းဝင်ရောက်နိုင်သည်
ဟုတ်တယ်။ သုံးစွဲသူတိုင်းသည်အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခံရသည်။ ၎င်းတွင်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ သရုပ်ပြရန်ပုံငွေများပါဝင်ပြီးစျေးကွက်အခြေအနေများကိုထင်ဟပ်စေသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် Libertex မှတဆင့်ကုန်သွယ်မှုမပြုနိုင်ပါ။ ၎င်းအတွက်အကြောင်းပြချက်မှာ Libertex ကို CySEC မှထိန်းချုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကုန်စည်ဒိုင်များကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင် (CFTC) သို့မဟုတ်အမေရိကန် Securities and Exchange Commission (SEC) မဟုတ်ပါ။
ဟုတ်တယ်။ Libertex ကို CySEC မှအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်သည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဖောက်သည်များအားလုံ့လဝီရိယရှိရှိကျင့်သုံးခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်မှတင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာခြင်းတို့အတွက်သင့်အားစိတ်ငြိမ်သက်မှုပေးသင့်သည်။